Home Wararka Qatar oo sheegtay inay bixinayso lacagtii lagu xiray heshiiska Farmaajo & Rooble
Qatar oo sheegtay inay bixinayso lacagtii lagu xiray heshiiska Farmaajo & Rooble
Dowlada Qatar ayaa horay u balan qaaday in dowlada Federaalka siinayo lacag cadadkeeda lagu sheegay $12 Milyan oo doolar.
Bixinta lacagtaas ayaa lagu xiray heshiis ay gaaraan Farmaajo iyo Rooble. Sida ila xog’ogaal ah noo xaqiijiyeen, saacad ka hor ayaa loo sheegay Farmaajo in lacagtaas la soo Dayn doono dhawaan.
Dhanka kala, galabta ayaa ay ahayd markii qaar kamida hogaanka dalka Qatar ay qadka taleefanka kula hadleen Farmaajo iyo Rooble iyaga oo ku adeeyay inay heshiiyaan. MOL ma helin xogta rasmiga ah ee madaxda Qatar ee soo wacday labada nin.